Araka ny vaovao ofisialin’ny polisim-pirenena, io alatsinainy 9 septambra io, vao tamin’ny 7 ora hariva tetsy Andraharo, lehilahy miisa 3 no hitan’ny polisy manao fisafoana nidaroka rangahy lehibe iray. Nihazakazaka namonjy avy hatrany izy ireo izay avy ao amin’ny boriborintany fahenina. Lasa nitsoaka ireo mpanendaka. Nohenjehina ka voasambotra ny iray. Vokatry ny daroka nahazo Ilay rangahy dia vaky ny lohany sy ny orony Nentina avy hatrany natao fanadihadiana izy. Mampikolay ireo mponina amin’iny faritra Andraharo iny, indrindra ireo mpiasan’ny orinasa tsy miankina ny fanendahana takariva sy vao mangiran-dratsy eny an-toerana. Miandrandra hatrany ny fisafoana matetiky ny mpitandro filaminana ireo eny amin’ny manodidina. Ny zokiolona sy ny vehivavy no mazàna lasibatra.
Ireo efa nahazo taona sy ny vehivavy no hazain’ireo mpanendaka tahaka izao eny Andraharo